Zvakanakira fenzi yedare: yakasimba simba uye kuomarara. Mazuva ano, vanhu vanowanzoona ese marudzi ese esimbi zvigadzirwa muhupenyu hwavo. Ini ndinotenda vanhu vazhinji vanofanirwa kuziva kuti kana uchishandisa simbi yakadaro, iwe uchaona kuti kuomarara kwayo uye simba iri zvakanyanya kwazvo. Kunyangwe ikarohwa nenyundo kana kutyorwa nemaoko, haigone ...
Chii chaunoda kuti utarise paunenge uchitenga blade ine barbed tambo fenzi?
Blade barbed waya fenzi chigadzirwa chekuchengetedza fenzi chinonyanya kushandiswa kutenderera nhandare. Nhare yakasungwa waya waya inoitwa yemhando yepamusoro yakadzika-kabhoni simbi waya kana aluminium magnesium chiwanikwa waya ne spray welding. Zvakanakira reza rakakomberedzwa waya waya iri nyore kwese mamiriro, inyore installa ...
Fence ine 500mm inopisa-dhizaini blade ine barbed tambo fenzi
Nhare yakakosheswa tambo ndeyokuchengetedza chengetedzo yakakomberedzwa newaya mesh inoshandiswa muganho wedanho, njanji uye mugwagwa wakazvimiririra, nzanga nekukamurwa kwemaruwa uye denda rekudzivirira. Iine zvakanakira kugadzirwa kuri nyore uye kugadzirwa, kusimba kwekushandisa kwezvakatipoteredza, nyore kutumira ...
Kukarukureta nzira yekumisikidza uye kufukidza hurefu hwesimbi yakakomberedzwa keji
Maitiro ekuverenga iyo yakafukidzwa kureba kwetambo yakakomberedzwa cage? Iyi inotevera fomura yakapfupikiswa nehunyanzvi dhipatimendi rekambani yedu, iyo inogona kuve yakakamurwa kuita mhando mbiri seinotevera: 1. Algorithm yekufukidza hurefu hwesimbi-imwe yemhepo yakasungwa waya keji (kazhinji vatengi havaiti ...
Magadzirirwo eBarbed Wire Rolling Cage Column Tsigiro
Yakaomeswa waya keji mukoramu rutsigiro yakaitwa ye50x30mm yakasungwa waya keji rusvingo ukobvu 2mm Q235 rectangular simbi pombi (kana 50mmx50mmx4.5mm Q235 angle simbi) uye maviri Q235 mahwendefa esimbi ane upamhi hwe50mm, ukobvu hwe4.5mm, uye kureba kwe246mm uye 428mm zvichiteerana. Chikamu chepamusoro cherectani ...
Ndiani anosarudza mutengo wekumisikidza weye barbed waya keji.
Vatengi vazhinji vakavhiringidzika nezve mutengo wekumisikidza pavanotenga akavharirwa waya mabheji. Heano mamwe mazano kwauri. Chinhu chakanyanya kukosha pakuiswa kweye barbed waya keji kunoenderana neiyo topography. Pane musiyano pakati pemutengo wekugadza we ...